Minisiteran’ny Mponina – Fanodinkodinam-bola: tompon’andraikitra ambony fito nampidirina am-ponja vonjimaika | NewsMada
Niainga tamin’ny fampahafantaran’ny mpanara-maso ny fitantanambola (DGCF) ny fanadihadian’ny Bianco ny raharaha. Niafara amin’ny fampidirina am-ponja olona miisa fito noho fanahiana ny fanodinkodinam-bolam-panjakana tamin’ny tsenam-baro-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny Mponina izany.
Miisa 15 be izao ireo niakatra tetsy amin’ny Tendrom-pitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac), 67 ha, omaly. Raharaha tamin’ny taona 2018 izao noraisin’ny Bianco, sampana Antananarivo, an-tanana, izao, tamin’ny alalan’ny DGCF, nanomboka ny 1 septambra teo.
Hosoka sy fanaovana hosoka
Niainga tamin’ny tatitra vola azon’ny eny Ambohibao izany. Fantatra fa ahina ny nisian’ny hosoka sy ny fanaovana hosoka. Fanodinkodinam-bolam-panjakana sy tolotra na fanomezana tsy mazava sy fanadiovam-bola « cadeaux illicites et blanchiment de capitaux »…
Tale sy tompon’andraikitra ambony samihafa
Anisan’ny ahina ho tsy afa-bela amin’izany fa voarohirohy amin’izao raharaha izao ny tale misahana ny vola eo anivon’ity minisitera ity tamin’ny fotoan’androny. Eo koa ireo mpitantana ny kaontimbola miisa roa « dépositaires comptables » sy ny tompon’andraikitra roa misahana ny tsenam-baro-panjakana, mpitantana iray « gestionnaire d’activités » ary ireo mpamatsy entana maromaro.
Miandry ny ho tohin’ny fanadihadiana
Nilatsaka ny didy teo anivon’ny Pac ka fito ireo nampidirina vonjimaika am-ponja eny Antanimora ny 17 novambra teo. Ny valo kosa, nahazo fahafahana vonjimaika ary mbola miandry ny mety ho tohin’ny fanadihadiana sy ny famotorana izy ireo.